Thursday February 20, 2020 - 21:14:57 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Abiy Axmad oo ah Ra'iisulwasaaraha Itoobiya ayaa waxa uu dowladda Holland ka helay Taaj hadiyad ah oo ay ku xardhan tahay calaamadda Kiristanka islamarkaana ka tarjumaya xiriirka diineed ee ka dhaxeeya labada dal.
Taajkan ayaa waxaa Abiy gudoonsiiyay Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga ee Netherlands Sigrid Kaag oo ay wehliyeen dad kale oo ka tirsan dowladda wadankaas.
Sawirka ayaa waxaa laga dheehanayaa Ra’iisulwasaaraha Itoobiya oo aad ugu faraxsan astaanta diineed ee la siiyay iyo Wasiirka Ganacsiga Holland oo dhoolacaddeynaya.
Hadiyaddan ayaa kusoo aaday iyadoo Abiy uu dadaal ugu jiro sidii uu gacanta ugu dhigi lahaa mandiqaada Geeska Afrika oo uu waligeedba kasoo jiray loollan u dhaxeeya Muslimiinta iyo Kiristaanka.
Qoraal kooban oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu ku sheegay in Taajkan ay horey u lahayd Itoobiya lagana xaday qarnigii 18-aad (waa sida uu hadalka u dhigaye)
Todobaadkan gudihiisa ayay aheyd markii uu isla bartiisan kusoo daabacay qariidad muujinaysa in gobolada Waqooyi galbeed (Somaliland) uu ka jaray Soomaaliya inteeda kale, kuna biiriyay dhulka hawd iyo galbeed ee uu horey gumeystihii Ingiriisku u siiyay.